Noteren’ny fitsarana hamoaka ny toe-bolan’ny orina mpanasoa Amerikana ny Minisiteran’ny Raharaham-bahiny Hongroà · Global Voices teny Malagasy
Miezaka manafina ireo porofom-pironana politika Amerikana ny mpitondra Hongroa
Voadika ny 01 Avrily 2020 10:08 GMT
Ilay ambasadaoro Grenell nitsidika ny Foara Iraisam-pirenena ho an'ny Fitaovana Elektronika tany Berlin tamin'ny taona 2018. Sary azon'ny rehetra ampiasaina avy amin'ny Masoivoho Amerikana tany Berlin.
Ity tantara ity dia navoakan'ny fikambanan'ny asa fanaovan-gazety fanadihadiana Hongroa tsy mitady tombombarotra, Atlatszo voalohany tamin'ny teny Hongroà sy Anglisy. Navoaka eto indray ny lahatsoratra nasiam-panitsiana noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty miaraka amin'ny Global Voices.
Tamin'ny taona 2015, nanangana orina mpanasoa tany Etazonia mba hampiroboroboana ny kolontsaina sy ny vakoka Hongroà tany Etazonia ny fanjakana Hongroà. Nahazo volam-panjakana an-jatony tapitrisa forints Hongroà nandritra ny herintaona ity Orina Mpanasoa Magyar ho an'i Amerika Avaratra ity saingy nandà ny fanazavana ny fomba nandaniany izany kosa ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny Hongroà. Nitory ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ny Varotra noho ilay dosie ny Atlatszo ary noteren'ny fitsarana tao Budapest ny ministera hanambara ny antsipirian'ny fandaniam-bola .
Nomen'ny fanjakana Hongroà hiandraikitra izany tamin'ny 2015 ny Orina Mpanasoa Magyar any Amerika Avaratra (MFNA) ary efa nandany miliara forints maro tany Etazonia nanomboka tamin'izay ho fampiroboroboana ny vakoka, ny tantara ary ny rehareha Magyar tamin'ny alàlan'ny fandaharan'asa ara-panabeazana sy ara-tsosialy ary ara-kolontsaina.
Notombatombanan'ny Atlatszo fa mitentina 700 tapitrisa forints farafahakeliny (mihoatra ny 2 tapitrisa dolara) isan-taona ny totalin'ny volan'ny mpandoa hetra Hongroà izay nolanian'ity orina mpanasoa ity.
Nahazo fampahafantarana momba ny hetra avy amin'ny MFNA tany Etazonia ihany koa ny Astlazo izay nanambara fa mpiara-miasa sady mpiara-miombon'antoka amin'i Arthur J. Finkelstein teo aloha, ilay mpandalina ny paikady ara-politika Repoblikana efa nodimandry izay niasa ho an'ny antoko mpitondra Hongroà Fidesz mandra-pahafatiny tamin'ny taona 2017, ny mpitarika ny fikambanana.
Tamin'ny volana Febroary 2020, nanambara ny fanadihadiana nataon'ny Responsible Statecraft fa i Richard Grenell, Tale vaovao napetraky ny Filoha Trump tao amin'ny Sampam-pitsikilovam-pirenena, dia fantatra fa nanome servisy fifandraisana amin'ny daholobe navantana tamin'ny fampitam-baovao ao Etazonia tamin'ny anaran'ny Orina Mpanasoa Magyar ao Amerika Avaratra.
Tsy nisoratra anarana ho vahiny mpiasa araka takian'ny Lalànan'ny Fanoratana Anarana Mpiasa Vahiny (FARA) i Grenell, izay fepetra takiana amin'ny olona sy ny orinasa miasa any Etazonia amin'ny maha-vahiny “mpiasa” na “tompon'andraikitra” azy ireo.
Lalàna iray any Etazonia ny Lalànan'ny Fanoratana Anarana Mpiasa Vahiny (FARA) izay “mitaky ny mpiasa sasantsasany amin'ireo tompon'andraikitra vahiny izay ao anatin'ny iraka politika na iraka hafa voalaza araka ny lalàna mba hanambara tsy tapaka ampahibemaso ny fifandraisany amin'ny tompon'andraikitra vahiny, ary hanambara ihany koa ny hetsika, ny fidiram-bola sy ny vola mivoaka hanamarinana ireo hetsika ireo.” Ampahafantarina ny daholobe ao amin'ny tranonkalan'ny FARA.GOV ireo antontan-taratasy ireo. Araka ny filazan'ny Departemantam-pitsarana Amerikana, ahitana “lamandy tsy mihoatra ny 10.000 dolara na sazy an-tranomaizina tsy mihoatra ny dimy taona” ny sazy amin'ny heloka bevava ho an'ny “olona rehetra izay minia manitsakitsaka ny andinin-dalànan'ny FARA na ny fitsipika mikasika izany”.
Nanonona antontan-taratasy (1, 2) izay voarain'ny Atlatszo tamin'ny fitakiana hahazo fahalalahana ara-torohay tany amin'ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ny Varotra any Hongria ny Responsible Statecraft, ka tao no nanambaràny fa nanakarama ny orinasan'i Grenell, Capitol Media Partners ny MFNA, izay, araka ny fanambaram-bola tamin'ny taona 2017 avy amin'ny MFNA dia nahazo vola mitentina 103.750 dolara Amerikana noho ny servisy Fifandraisana amim-bahoaka.
Nandresy ny Atlatszo tamin'ny fitoriana FOI nanoherany ny Minisiteran'ny Raharaham-bahiny sy ny Varotra any Hongria tamin'ny taon-dasa ary nahazo ny famintinana faktiora taona 2015, 2016, 2017 sy ny tapany voalohany amin'ny taona 2018. Nasehon'ny antontan-taratasy nosoniavin'ny Filoha Tale Jeneraly Jo Anne Barnhart ny habetsaky ny vola azon'ireo mpiantsoroka ao amin'ny MFNA izay niantohana saran'ny dia, araka ny fifanarahan'ny orina mpanasoa tamin'ny orinasa. Nahitana fandaniam-bola kely totalim-pandaniana tamin'ny dia sy ny filankevitra ho an'ny Capitol Media Partner an'i Richard Grenell.
Manjavona ary saika tsy voavaky ny sasantsasany tamin'ireo antontan-taratasy voarain'ny Atlatszo : fomba fanao mampiahiahy mahazatra ataon'ireo andrim-panjakana Hongroà rehefa teren'ny fitsarana hanambara zavatra ny manao hosoka ireo antontan-taratasy mba hanasarotana kokoa ny asan'ny mpanao gazety. Azonao atao ny mitroka ny famintinana ny faktiora ôrizinaly araka ny nandraisana izany ( 2015-2016, 2017 sy 2018), ary novaina ho endrika nomerika azo vakiana amin'ny milina ( 2015-2016 , 2017 sy 2018 ).
Araka ny lahatsoratra tao amin'ny Washington Post tamin'ny 28 Febroary, na dia nokaramaina aza ny orinasam-pifandraisana amin'ny daholobe Grenell hanao asa ho an'ny fikambanana iray tsy mitady tombontsoa ao Etazonia izay vatsian'ny governemanta Hongroa manontolo dia “tsy misy ny filazana fa manao fanadihadiana momba ny asan'ny Grenell ny Fitsarana.”
Azerbaijan 21 ora izay